Izay no tiako momba an'i Jesosy | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Raha nanontaniana ny antony itiavako an'i Jesosy ianao dia izao no valiny marina ara-Baiboly: "Tiako i Jesosy satria tia ahy aloha izy ary vonona ny hanome ny zavatra rehetra ho ahy (1 Jaona 4,19). Izany no antony itiavako an'i Jesosy amin'ny maha-izy azy manontolo, fa tsy ampahany aminy fotsiny. Tiako ihany koa ny vadiko, tsy noho ny tsiky tsiky, ny orony na ny faharetany.
Raha tena tianao ny olona iray, dia manana lisitra lava tsy ela ianao, izay mahasarika azy ireo indrindra. Tiako i Jesosy satria tsy ho eo aho raha tsy misy azy. Tiako i Jesosy satria tsy avelany hianjera mihitsy aho. Tiako i Jesosy satria, satria. , ,
Fa ny fanontaniana dia angamba raha tsy misy zavatra miavaka momba an'i Jesosy izay midika fa be dia be amiko rehefa mieritreritra azy amim-pitiavana aho!? Ary tena misy - misy ny iray: "Tiako mihoatra noho ny zava-drehetra i Jesosy, satria ny famelan-keloka dia midika izany fa tsy mila maneho sarin-tenako ho an'ny olon-kafa intsony aho, fa afaka misokatra amin'ny fahalemeko, ny hadisoako ary ny fahotana".
Ho ahy, ny fanarahana an'i Jesosy dia mihoatra noho ny zavatra azo ampiharina rehetra. Eto no misy ny famelana ny fahotana izay nataon'i Jesosy. Heveriko fa mahafinaritra raha tsy mila manaporofo amin'ny rehetra fa tsy lavorary sy lavorary aho. Ity fiainana mamoa-tena ity dia manimba ahy ara-tsaina. Ny fihenjanana tsy tapaka amin'ny saron-tava sy ny fanamiana tsy miova lalandava dia mitaky fotoana sy harona ary matetika tsy mandeha amin'ny farany.
Jesosy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotako sy ny hadisoako. Raha voavela ny heloko dia tokony ho mora kokoa amiko ny hanaiky hoe iza aho marina.
Tsy hitako akory ilay zava-drehetra dia fahazoan-dàlana avy amin'i Jesôsy hoe manao fahadisoana be dia be na mandavana mafy amin'ny ota. Ny famelana heloka dia tsy miharihary ny lasa. Manome anao tanjaka izy io hanova zavatra. Io fahefana io dia tsy voalaza ao anaty Baiboly ihany fa vokatry ny famelan-keloka, dia mitodika ahy mihintsy izany. Na izany na tsy izany dia ampy hiovana amiko. Tena zava-dehibe amin'ny fifandraisako amin'i Jesosy ny nanombohako ny finoako amin'ny fanakianana ahy. Ao amin'ny Baiboly, ny finoana dia manomboka amin'ny fahafantarana ny tsy fahaizan'ny tenany sy ny fahalemeny. Izany dia tsy ny manohitra ihany no tsy mino sy ny tontolo ratsy fa ny mpino koa. Ny boky feno ao amin'ny Testamenta Taloha dia natokana ho an'ny fanambaràna miverimberina hatrany eo amin'ny vahoakan'i Isiraely. Ny boky manontolo ao amin'ny Testamenta Vaovao dia manambara ny toe-piainana mampivarahontsana eo amin'ny fiaraha-monina kristianina.
Jesosy dia manafaka azy ireo ho fanakianana tena. Azonao atao ny mandatsaka ny masonao amin'ny farany ary ho lasa ianao. Faly be izany!
nataon'i Thomas Schirrmacher